धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको 'पशुपति'मा चर्केकाे राजनीति
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको 'पशुपति'मा चर्केकाे राजनीति धार्मिक स्थलमा सरकारले राष्ट्रिय गान बजा भन्न मिल्दैन : भीमार्जुन आचार्य
विवश कुलुङ बुधबार, २५ भदौ २०७६
काठमाडौं । नेकपाका युवा नेता योगेशकुमार भट्टराई जब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नियुक्त भए, अधिकांश नेपाली युवा जमातले खुसी मनायो ।
युवा मात्र होइन, आम नेपाली जनताका ‘आशलाग्दा’ युवा नेता मन्त्री बनेपछि दिवंगत मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकै उत्तराधिकारीका रुपमा स्वीकार गरियो । स्वयं मन्त्री योगेशले पनि आफू रवीन्द्रकै उत्तराधिकारी भएर आएको बताएका थिए ।
योगेशले नेपालको हवाई क्षेत्रसँगै संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने आशा नेपालीमा छ । तर पछिल्लो समय तिनै मन्त्रीले गरेको एउटा निर्णयले भने नेपालमा तहल्का पिटिरहेको छ । निर्णय सामान्य नै थियो– पशुपतिमा साँझ गरिने गंगा आरतीभन्दा अगाडि राष्ट्रिय गान बजाउने ।
तर यही सामान्य लाग्ने विषयमाथि असामान्य बहस भइरहेको छ यतिबेला । एउटा विशुद्ध धार्मिक संस्थामा राजनीतिले पुनः प्रवेश पाएको छ । यसअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि पशुपतिलाई राजनीतिक विवादमा ल्याइएको थियो ।
यतिबेला पशुपतिमा आरती अगाडि राष्ट्रिय गान बजाउने मन्त्रीको निर्णयमा स्पष्ट दुई धार बनेको छ । एक धारले मन्त्रीलाई बचाउ गर्दै आएको छ भने अर्को धारले यसले धार्मिक आस्थामाथि नै प्रहार गरेको बताइरहेको छ ।
कहाँनिर हुन्छ पशुपतिमा आरती ?
पशुपति परिसरमा जहाँनिर साँझको गंगा आरती गरिन्छ, त्यसको ठीक तलपट्टि अर्धजल दिने ठाउँ छ । मानिसको प्राण जाने बेलामा उसका खुट्टा बाग्मतीको पानीमा डुबाएर मुखमा पशुपतिको जल खुवाउने गरिन्छ । जसलाई अर्धजल भनिन्छ । त्यसको ठ्याक्कै पारिपट्टि १ र २ नम्बरका घाट छन् ।
देशको राजधानी भएको र यहाँको जनसंख्या पनि बढी भएका कारण पशुपति आर्यघाटमा प्रायः दाहसंस्कार भइरहेकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा माथिल्लो डिलमा आरती भइरहँदा तल्लो डिलमा शव जलिरहेको हुन्छ भने छेउमै मलामी र क्रियापुत्रीहरु बसेका हुन्छन् ।
कुनै पनि देशको राष्ट्रिय गान बज्दा उभिएर सम्मान गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम हुन्छ । यो गीतको मात्र नभएर राष्ट्रप्रतिकै सम्मान हो । तर, कुनै व्यक्ति चितामा जलिरहेका बेला आफन्तजन शोकमा डुबेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय गान बजेपछि शोकलाई बिर्सेर मलामी र क्रियापुत्री उठेर सम्मान जनाउन सक्लान् ?
धर्मनिरपेक्ष देशमा धार्मिक क्षेत्रमा सरकारले निर्देशन दिन मिल्छ ?
नेपाल अहिले संविधानतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । संविधान अनुसार नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक राज्य हो ।
नेपाल हिन्दु बाहुल्य भए पनि हिन्दु राष्ट्र होइन । अब प्रश्न यो उठ्छ कि एउटा धर्मनिरपेक्ष देशमा कुनै विशेष धार्मिक स्थलमा सरकारले यो गर वा त्यो नगर भनेर निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
‘धर्म सापेक्ष होस् वा निरपेक्ष, धार्मिक स्थलमा राष्ट्रिय गान बजाउन निर्देशन दिनु कुनै पनि हिसाबले ठीक होइन’, संविधान र कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘यदि यो निर्णय नै गरेर दिइएको निर्देशन हो भने सच्याउनुपर्छ ।’
योगेश भट्टराई जत्तिको जानेबुझेको मन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएकामा आश्चर्य व्यक्त गर्छन भीमार्जुन । उनका अनुसार सनातनदेखि चलिआएका संस्कृति र परम्परालाई त्यसै अनुरुप चल्न दिनुपर्छ । मन्दिरमा यो बजाऊ र त्यो नबजाउ भनेर निर्देशन दिनु धार्मिक आस्थामाथि हस्तक्षेप हुने आचार्यको बुझाइ छ । आचार्य भन्छन्, ‘यो निर्देशन कानुनी, धार्मिक, सामाजिक कुनै पनि हिसाबले ठीक छैन ।’
२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा हिन्दु धर्म मान्नेको संख्या ८१ प्रतिशत, बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या ९ प्रतिशत, इस्लाम धर्म मान्ने ४ दशमलव ४ प्रतिशत, किराँत धर्म मान्ने ३ प्रतिशत छन् भने इसाई १.४ प्रतिशत र प्रकृति धर्म मान्ने शून्य दशमलव ५ प्रतिशत छन् । यस्तै, बन, जैन, बहाइ र शिख धर्मावलम्बीको संख्या पनि देखाएको छ ।
राष्ट्रिय गानले कुनै जाति र धर्म विशेष वा कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै अधिकार राख्दैन । सिंगो राष्ट्रले यसको सम्मान गर्नुपर्छ । हरेक धर्मले, हरेक जातिले यसलाई सम्मानसाथ गाउनुपर्छ ।
त्यसकारण राष्ट्रिय गानलाई सबैतिर अनिवार्य गर्ने हो भने पशुपतिमा मात्र होइन, बौद्धधर्मका लाखौँ गुम्बा, शिख धर्मका गुरुद्वार, इसाई धर्मका चर्च, जैन धर्मावलम्बीका जैन मन्दिरलगायतमा हुने धर्मअनुसारका पूजा अगाडि बजाउन लगाउनुपर्ने एकथरिको तर्क छ ।
विवादपछि रोकियो, लगत्तै मन्त्रीको ‘खै’
पशुपतिमा आरती गर्नुअगाडि राष्ट्रिय गान बजाउने निर्देशन विवादमा तानिएपछि सोमबार साँझ आरती समितिले राष्ट्रिय गान नै बजाएन । राष्ट्रिय गानप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी आएपछि बजाउन छाडिएको पशुपति आरती समितिले जनाएको छ ।
निर्देशन फिर्ता लिन सरकारलाई अनुरोध गरे पनि सुनसवाइ नभएपछि समितिले त्यसको अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेर सोमबार गान नबजाएको हो ।
तर सोमबार राष्ट्रिय गान नबजाउने बित्तिकै मन्त्री योगेश भट्टराईले यसबारे प्रष्टीकरण लिएर पुनः बजाउन निर्देशन गरे । मन्त्रीको स्पष्टीकरणमा भने मोबाइलमा गीत नबजेर राष्ट्रिय गान बजाउन नसकेको बताइएको छ ।
संसद्‍देखि सामाजिक सञ्जालमा विरोध
धार्मिक संस्कृतिसँग जोडिएको पशुपतिनाथको आरतीअघि राष्ट्रिय गान बजाउन उचित नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमै आपत्ति जनाइसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् भीमसेनदास प्रधानले पशुपतिमा नेपालको राष्ट्रिय गान बजाउँदा राष्ट्रको बेइज्जत हुने तर्क गरेका थिए । उनले भने, ‘यो हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्पार विरोधी कुरा हो । पशुपतिमा आरती मात्र हुँदैन । त्यहाँ दाहसंस्कार गर्ने मलामी र आफ्ना परिवारजनलाई सान्त्वना दिने आफन्त गएका हुन्छन् । पशुपतिमा आफन्तको दाहसंस्करमा रहेका पुत्रपुत्रीले राष्ट्रिय गीत बज्दा उठ्ने कि नउठ्ने ?’
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा पनि यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी आइरहेका छन् । कसैले व्यंग्य गरेका छन् भने कसैले सिधै विरोध गरेका छन् । हेर्नुहोस् सामाजिक सञ्जालमा आएका केही प्रतिक्रियाः